Nchedo data & Iwu nzuzo AAAA ADVISER
Akwụkwọ ndị achọrọ
Kitts na Nevis gbara ụbọchị 60 gbara ọsọ
anyị ụlọ ọrụ AAAA ADVISI (https://immi.website) na ndị ọrụ ya ga-anwa ichedo data nzuzo gị na ozi gbasara gị. Anyị egosipụtala n'okpuru otu anyị si anakọta ma jiri data gị.
1. Otu anyị si eji ozi gbasara gị na data gị
AAAA ADVISI na-anakọta ma jiri data gị na ozi onwe gị iji dozie nsogbu nke nchịkwa na nkwado ndị ahịa, iji nyere ndị ahịa anyị aka. Anyị na-eji data gị na ozi onwe gị iji nyochaa nnabata na iwu na nkwekọrịta niile.
2. Ojiji nke ozi gị na data maka nzube ahịa
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka ozi niile gbasara gị ghara ịbanye mgbe emesiri maka nkwado nkwado, biko kpọtụrụ anyị na info@vnz.bz, anyị ga-ahụ na ị anataghị ngwa ahịa ọ bụla ma ọ bụ ozi ndị ọzọ si n'aka anyị.
3. Nchịkọta nke ozi na data nkeonwe
Ozi niile nke ụlọ ọrụ anyị AAAA ADVISI nakọtara na-abịakwute anyị ozugbo, dị ka ndị ahịa anyị. Echekwara data gị niile ma chekwaa na ụlọ ọrụ anyị na-enweghị ike iji ndị ọzọ iji ha. Anyị ga-echekwa ozi onwe gị oge zuru oke iji nye nkwado na nhazi nke ọrụ anyị.
4. Ozi gbasara gị na ụlọ ọrụ anyị na-anakọta
Mgbe anyị na-akpọtụrụ ụlọ ọrụ anyị site na ịkpọtụrụ ọfịs, ekwentị, ụzọ nkwukọrịta elektrọnik, yana ileta akụ na ụba Internetntanetị anyị, anyị na-anakọta data gbasara ndị ọrụ na ndị ahịa anyị nke na-etinye iwu site na iji nkwukọrịta na ụzọ ịkpọtụrụ dị.
Data anyị nakọtara nwere ike ịgụnye ozi gbasara mmekọrịta na mgbasa ozi, ozi gbasara netwọọkụ, data gbasara sistem, nkwukọrịta na ngwaọrụ kọntaktị, ozi gbasara ndị okenye na ndị nnata ozi nke ụlọ ọrụ anyị zitere ma ọ bụ nata. Anyị nwere ike ịnakọta ozi gbasara oge na ebe anyị ga-abanye na ọrụ ma ọ bụ akụ. Anyị na-anakọta ozi gbasara oge nke kọntaktị, nnabata nke clicks na data sistemụ ọ bụla ọzọ.
Ozi a nwere ike igosi gị na isi mbata gị na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị na-enwe nchegbu banyere data gị, ị nwere ike ịchọgharị saịtị anyị na-amaghị.
N’arịrịọ gị, anyị nwere ike ịnye gị ozi anyị chebere gbasara gị, dabere na njirimara gị. Onweghi ihe omuma a nke ndi oru ozo mara, ma ewezuga onodu a maka mmejuputa iwu na aririo ajuju nke ndi isi ochichi nke nwere ikike ime ya.
Anyị na-anakọta ozi gbasara ndị ọbịa na webụsaịtị anyị, na-anakọta adreesị email mgbe ị na-akpọtụrụ ụlọ ọrụ anyị, ụlọ ọrụ anyị na-anakọta nọmba ekwentị na data mkpanaka mgbe ị na-akpọtụrụ ebe anyị na-akpọtụrụ ma ọ bụ site na ekwentị na onye ọrụ.
Ihe omuma nke ulo oru anyi nakọtara bụ ihe eji eme ya maka nyocha nke ime na imeziwanye ọrụ anyị, akụrụngwa ịntanetị na ọrụ anyị.
A naghị ebugharị ozi gị ọ bụla na ndị ọzọ ma e wezụga maka nnweta ngwa ahịa nye gị, yana mkpuchi nke nnyefe a, na nke a, a ga-ebufe ozi niile dị mkpa na ụlọ ọrụ ga-ebuga ngwongwo ahụ na adreesị gị na mkpuchi gị. ụlọ ọrụ. Site n'itinye iwu maka nnyefe ngwa ahịa na weebụsaịtị anyị ma ọ bụ site na ekwentị, ị kwenyere n'inye ozi gị n'aka ndị ọzọ nwere ọrụ ịhazi nnyefe ngwaahịa a na adreesị gị yana mkpuchi ya.
Ọ bụrụ na ịchọghị ịnata ozi ọ bụla ọzọ na-abụghị nke dị mkpa dị ka akụkụ nke iwu gị na ogbugbu ya, ị nwere ike ị degara anyị akwụkwọ na adreesị anyị: info@vnz.bz
5. ofzọ nchekwa na ndụ nchekwa
Anyị na-echekwa ozi gị na ntọala ahịa anyị. Companylọ ọrụ anyị ga-eji ozi a wee chekwaa ezigbo oge. Anyị chọrọ ozi a iji nye ajụjụ ma dozie nsogbu gbasara ọrụ anyị yana ihe achọrọ nke iwu nchekwa data. Anyị na-edobe ikike ịchekwa ozi a mgbe emechara ọrụ na ire anyị, ọbụlagodi ma ịgaghị eji ọrụ ụlọ ọrụ anyị. A ga-echekwa ozi niile maka oge ezi uche dị na ya, ọ gwụla ma iwu ma ọ bụ ndị isi nchịkwa na ndụmọdụ chọrọ ka anyị dobe ya ogologo.
6. Onye nke atọ
Anyị nwere ikike inyefe ozi gị na ndị ọzọ metụtara mmezu nke iwu anyị maka gị. Na-enweghị nkwenye ọzọ, anyị na-ebufe ozi gị na ọrụ nnyefe, ụlọ ọrụ mkpuchi metụtara nnyefe ngwa ahịa a. Anyị nwere ikike ịbufe adreesị gị zuru ezu, aha na aha nna, nọmba ekwentị yana data ndị ọzọ dị mkpa iji mezue iwu a. Anyị na-enye ozi niile naanị maka ụlọ ọrụ ndị ahụ na-arụ ọrụ dịka iwu si na nchedo na nchekwa data. Na arịrịọ gị, ịnwere ike ịnata ozi n’aka anyị onye nyere gị data yana mgbe enyere data gị.
Onweghị ndepụta aha ndị ahịa anyị na-agafere na ndị ọzọ, belụsọ maka arịrịọ sitere n'aka ndị isi ala, ọ bụrụ na enwere.
7. Njikere email, mmekorita, ozi na nkwalite
Anyị nwere ikike iji akwụkwọ ozi zitere gị, ikpesa ozi, iji kpọtụrụ gị site na ekwentị ma ọ bụ site na websaịtị ma ọ bụrụ na itinye n'aka anyị n'ụzọ ọ bụla enwere ike. Kọntaktị niile kwere omume na naanị nkwukọrịta nke anyị nyere. Anyị na-edobe ikike ịnweghị ike izipu gị ozi gbasara ngwaahịa anyị, ego na nkwalite anyị. I nwere ikike ịjụ ịnabata ozi ndị a site na isoro ntuziaka ma ọ bụ site na ịdegara anyị akwụkwọ ozi na info@vnz.bz
8. Nyochaa Ozi Nzipu Ozi Email
Dịka akụkụ nke njikwa nchekwa, anyị nwere ikike ịgụ akwụkwọ ozi ọ bụla ezigara ndị ọrụ anyị. N'ihe banyere ọdịnaya echeghị echedo nke akwụkwọ ozi ọ bụla ma ọ bụ mgbakwunye ya, dị ka nje, anyị nwere ikike iwepu ma ọ bụ gbuo oge ya.
9. Iwu kuki
Saịtị anyị na-eji kuki, ndị obere koodu na faịlụ ndị na-eme ka arụmọrụ saịtị anyị dị na kọmputa gị. N’okpuru, anyị kọwara ihe ozi mgbe anyị na-anakọta kuki, otu anyị si eji ya na mgbe anyị chekwara ya.
I nwere ikike ịkagbu nbudata nke kuki, mana n'otu oge ahụ, anyị enweghị ike ikwe nkwa ịdị mma nke saịtị anyị.
Inwere ike iguta ihe banyere kuki na Wikipedia Ebe a.
Anyị na-akwado iji kuki maka ọrụ kwesịrị ekwesị na saịtị anyị nke ọma ma ọ bụrụ na ijighị n'aka ma ịchọrọ ha ma ọ bụ na ị chọghị. Can nwere ike iwepu ojiji nke kuki ma ọ bụrụ na ị ji n'aka na ịchọrọ ya. Mustkwesịrị ịghọta na eji kuki niile iji nye ọrụ ịchọrọ iji.
You nwere ike igbochi ihe nchọgharị gị iji kuki. Ikwesiri ighota na iji oru a machibido ojiji nke kuki site na ihe nchọgharị gi nwere ike gbanwee oru nke saịtị niile ị gara ma ọ bụ nke ịchọrọ ịga. Dị ka ịchọrọ, iwepu kuki ga-eme ka ụfọdụ atụmatụ na ike nke saịtị ahụ ghara ịdị, yabụ anyị na-akwado ka ị ghara ịmebi kuki.
Email kuki metụtara
Saịtị anyị nwere ike icheta onye ọrụ ma ọ bụrụ na ịdebanye aha anyị na anyị, iji gosi gị ụfọdụ thatma Ọkwa nke enwere ike iji ndị ọrụ ma ọ bụ ndị na-edebanye aha gị. Anyị na-enye ọrụ ntinye akwụkwọ akụkọ. Mgbe anyị na-eji ọrụ a, anyị na-eji kuki ndị chetara gị.
Ijikwa kuki metụtara ya
Weebụsaịtị anyị na-echeta kuki gị na kuki gị, ngwaahịa ị họrọla, a na-echetakwa ha mgbe i jiri webụsaịtị anyị iji kwado ọrụ ndị gụnyere ịkagbu ma ọ bụ dezigharị usoro gị.
Cookdị Kuki metụtara
Ọ bụrụ na i dejuo fọm ọ bụla na weebụsaịtị anyị, kuki nwere ike chekwaa data onye ọrụ gị maka ojiji ma ọ bụ akwụkwọ ozi na-eme n'ọdịnihu.
Kuki nke atọ
Na weebụsaịtị anyị, enwere ike iji kuki nke ndị ọzọ tụkwasịrị obi nyere. N’okpuru, anyị ga-akọwa n’ụzọ sara mbara nke kuki ndị ọzọ ị nwere ike izute mgbe ị na-eji saịtị anyị.
Anyị na-eji nchịkọta Google, nke anyị kwesịrị nyochaa saịtị anyị. Kuki nwere ike ijikwa oge anyị na saịtị anyị, ibe ndị ị gara, ọdịnaya kachasị amasị gị, oge ị gara na saịtị anyị.
Can nwere ike ịmụtakwu gbasara ozi kuki Google Analytics Ebe a.
Ọzọkwa, anyị na-echetara gị ka saịtị ahụ rụọ ọrụ nke ọma, anyị na-akwado ka ị hapụ kuki gị.
Anyị na-eburu ụzọ nchekwa maka ịchedo data gị nke ọma ma were usoro ezi uche dị na ya iji hụ na nchekwa ha. Dabere na data ahụ, anyị na-eji ọrụ nke nchebe paswọọdụ, izo ya ezo, njikwa nweta, nkwado ndabere, usoro mbufe na njikwa iguzosi ike n'ihe gburugburu ebe obibi iji kpuchido data gị na mfu ma ọ bụ mmeghe.
Ntị: Anyị anaghị echekwa nkọwa gbasara ụgwọ gị ma ọ bụ kaadị debit. A na-ezochi data nke kaadị gị nke ị na-akwụ iji zoo ma ghara echekwa ya.
11. Ajụjụ na arịrịọ
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ndị ọzọ gbasara iwu nzuzo, nchekwa data ma ọ bụ ojiji ha na ọrụ anyị, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị maka ozi a: info@vnz.bz
Amaala nke Saint Kitts na Nevis njikọ njikọ ngwa ngwa:
© 2020, Amaala Saint Kitts na Nevis Kwadoro site na Shopify